DAAWO: Dulucda cadaalad darada
Liverpool ayaa aaminsan in garsoorayaasha Premier League ay tahay inay ula dhaqmaan si ka duwan kooxaha kale iyagoo u diidaya inay siiyaan rikoor rikoor ah, halka sidoo kale ay helaan caddeyn yar.
Liverpool ayaa sidoo kale dareensan in goolka saxda ah in badan laga diiday xilli ciyaareedkan, iyada oo ay jiraan dhaawacyo halis ah oo aan u keenin ciyaartoydooda ama qaarkood aan la ganaaxin ama aan wax jaale ah la siinin.
Tababare Jurgen Klopp ayaa Isniintii sheegay in laba rigoore oo cadaan ah la diiday kulankii ay kooxdiisu guusha 1-0 ka gaadhay kooxda Southampton, kubad gacanta ah oo ku jirtay daafaca Southampton oo aan sumad lahayn iyo khalad ku dhacay Sadio Mane kor u kac.
Ciyaarta Southampton ayaa waxaa daawaday seddex jeer VAR, labada rigoorena waxay ka dhasheen qaladkii Theo Walcott uu ku galay James Milner, kaasoo markale qaatay kaar jaale ah.
Muuqaal la soo dhigay Twitter-ka ayaa lagu soo aruuriyay qaladaadkii garsoorayaasha Liverpool ee xilli ciyaareedkan waxaana lagu daray doodda Jurgen Klopp ee ah in Manchester United ay hesho rigoorooyin badan, halka kooxdiisa loo diido rigoorooyin iyo goolal cadaan ah.
Filimka waxaa ka mid ah dhacdooyin ka dhan ah Southampton, Virgil van Dijk oo dhaawac halis ah u geystay Jordan Pickford bishii Oktoobar, Jordan Henderson oo casaan qaatay qalad uu galay iyo Sadio Mane oo qalad sameeyay. inta badan la qabtay.
Halkan guji si aad u eegto go’aanka haddii go’aanka uu ahaa mid cadaalad ah iyo haddii doodaha Liverpool ay run yihiin:
Liverpool & VAR – Qaddarka go’aannada xun ee iyaga ka hor yimid ayaa aad u xun, adeegga ayaa sidoo kale nasiib darro ahaa.
– CF Comps (@CF_Comps) Janaayo 5, 2021
Muxuu Donny van de Beek u imaan waayey
Xiddig Liverpool ah oo cajiib ah